Dhismaha Saadka - Shiinaha Zhenyuan Structure Structure Engineering Co., Ltd.
Dhismayaasha Saadka waxaa loola jeedaa dhismayaal gaar ah oo loogu talagalay keydinta saadka iyo gaadiidka. Baarkinka Saadka waxaa loola jeedaa goob ay ku yaalliin tas-hiilaadyo kaladuwan oo noocyo kala duwan ah iyo noocyo kala duwan oo ka mid ah shirkadaha saadka ee ka hawlgala goobaha ay hawlahoodu saadka ku urursan yihiin iyo halka ay ku xiran yihiin dhowr nooc oo gaadiid ah Sidoo kale waa goob ay isugu yimaadaan shirkadaha logistics-ka oo leh miisaan iyo howlo kala duwan oo adeeg ah.
Si loo yareeyo ciriiriga taraafikada magaalooyinka, loo yareeyo culeyska warshadaha ee deegaanka, la ilaaliyo isku xirnaanta warshadaha, la jaanqaado isbeddelka horumarka ee warshadaha saadka, in la ogaado habsami u socodka alaabta, xaafadaha magaalada ama miyiga iyo aagga xeebta u dhow halbowlayaasha taraafikada, tiro ka mid ah kooxaha saadka oo xoog leh gaadiidka, kaydinta, suuqa, macluumaad iyo maaraynta shaqooyinka ayaa la go'aamiyaa. Iyadoo loo marayo horumarinta tartiib-tartiib ah ee kaabayaasha kala duwan iyo tas-hiilaadka adeegga, iyada oo la siinayo siyaasado kala-doorbidyo kala duwan si loo soo jiito xarumaha ballaaran ee saadka (qaybinta) si halkan loogu soo ururiyo oo looga dhigo inay helaan faa'iidooyin baaxad leh ayaa door muhiim ah ka qaadatay is-dhexgalka suuqa iyo ogaanshaha dhimista qiimaha saadka. maaraynta. Isla mar ahaantaana, waxay yareysay waxyeelooyin kala duwan oo ay keeneen qeybinta xarumo ballaaran oo wax lagu qeybiyo oo ku yaal bartamaha magaalada waxayna noqdeen warshadaha aasaasiga ah ee taageera dhaqaalaha casriga ah.
Gobol gaar ah, dhammaan howlaha la xiriira badeecada gaadiidka, saadka iyo qaybinta, oo ay ku jiraan gaadiidka caalamiga iyo kuwa gudaha, waxaa lagu xaqiijiyaa howl wadeeno kala duwan (OPERATOR). Hawl wadeenadani waxay noqon karaan milkiileyaal ama kiraystayaasha dhismayaasha iyo tas-hiilaadka (bakhaarrada, xarumaha kala-daadinta, meelaha alaabada, xafiisyada, baarkinka gawaarida, iwm.) Halkaas laga dhisay Isla mar ahaantaana, si loogu hoggaansamo xeerarka tartanka xorta ah, tuulada xamuulka waa inay u oggolaataa dhammaan shirkadaha si dhow ula xiriira howlaha ganacsi ee kor ku xusan inay soo galaan. Tuulada xamuulka sidoo kale waa inay lahaataa dhammaan tas-hiilaadka dadweynaha si loo gaaro dhammaan howlaha aan kor ku soo sheegnay. Haddii ay suurtagal tahay, waa inay sidoo kale ku dartaa adeegyada bulshada ee shaqaalaha iyo qalabka isticmaalayaasha. Si loo dhiirrigeliyo gaadiidka kala duwan ee badeecadaha, waxaa lagama maarmaan ah in loo adeego tuulo xamuul iyada oo loo marayo habab gaadiid oo kala duwan oo ku habboon (dhul, tareen, bad weyn / dekedda biyaha dhaadheer, wabiga gudaha iyo hawada). Ugu dambeyntiina, waxaa lagama maarmaan ah in tuulada xamuulka ay ku shaqeyso hal waax oo keliya (RUN), mid dowladeed ama mid gaar loo leeyahay.
Dhismayaasha Saadka waxaa iska leh dhismayaasha dadweynaha. Horumarka degdegga ah ee xilliyada, dhismayaasha saadka waxaa lagu soo bandhigay qaabkeeda gaarka ah. Jardiinooyinka Saadka ee gaarka loo leeyahay waxay toos u aadaan dekedda ama garoomada diyaaradaha, iyo xarumaha qaybinta gaarka loo leeyahay waxay toos u aadaan goobo kala duwan oo wax lagu qaybiyo, iyagoo sameeya silsilad mideysan oo mideysan.
Bakhaarka Baakadka Saadka
Xarunta Qaybinta Saadka